Details of Mugabe's Estate Disclosed - But No Will Found - allAfrica.com
Zimbabwe's late former president Robert Mugabe, who died in September 2019, left U.S.$10 million and some properties in the capital, but no will naming his beneficiaries, according to state-owned newspaper, The Herald. Zimbabweans have speculated for years about the extent of Mugabe's wealth, with many assuming that he and his family amassed a vast fortune during his 37 years in power.
The Herald, 3 December 2019
The family of Zimbabwe's founding President, the late Cde Robert Mugabe, has failed to locate an inheritance will for the distribution of the national hero's estate, a development… Read more »
Suspected ruling party supporters have occupied a farm belonging to former president Robert Mugabe on the outskirts of Harare. Earlier President Emmerson Mnangagwa hinted at a ... Read more »
The family of Robert Mugabe is yet to register the late former president's estate which is estimated to be worth billions of dollars despite being directed to do so by December 5, ... Read more »
Zimbabwe: Once Untouchable, Now Her World's Crumbling
Grace Mugabe, the widow of the late former President Robert Mugabe, has no plans to seek asylum outside Zimbabwe, a family spokesperson says. Grace fell out with President Emmerson ... Read more »
Former president Robert Mugabe reportedly amassed 21 farms during his reign as president of Zimbabwe, some of which he has been leasing to white farmers. This is despite Mugabe ... Read more »
Zimbabwe: Mugabes Own 21 Farms, Some Leased to White Farmers - State Media
Zimbabwe: War Veterans Vow to Take Back Farms from Zanu-PF G40 Faction
Is Southern Africa on the Brink of Famine?